Hary Andrianarivo manohana ny K25 : Mila averina ny fifampifehezana -
AccueilSongandinaHary Andrianarivo manohana ny K25 : Mila averina ny fifampifehezana
Hary Andrianarivo manohana ny K25 : Mila averina ny fifampifehezana
Gazety TRIATRA: anton’ny hanohananao an’i Marc Ravalomanana
Hary Andrianarivo: Mila averina amin’ ny laoniny ny filaminana eto Madagasikara, indrindra ny fifampifehezana, izay no antony nanohananay an’i Marc Ravalomanana. Mila olona to teny mahafehy ny manodidina azy, indrindra ny fanafoanana ny kolikoly mambotry ny firenena, izay manjaka amin’ izao fotoana izao. Tokony hamafisina ny fifehezana ireo tompon’andraikitra maro isan-tsokajiny eto amin’ ny firenena, ka i Ravalomanana Marc no efa hita fa mahafehy izany. Maro ireo fepetra efa napetrakay tany am-boalohany, ary tao anatin’ ny fifandresen-dahatra, hita fa nahafeno ny fepetra takianay i Marc Ravalomanana.
Gazety TRIATRA: fahitanareo avy any Atsimon’ny Nosy ny resaka halatr’omby
Hary Andrianarivo : Antony mahatonga tsy fandriam-pahalemana amin’ izao fotoana ny fisian’ ireo dahalo ambony latabatra, izay tsy vakin’ ireo mpitondra nifanesy loha hoy ity solombavambahoaka lany tao Ambositra ity , ka ny olona tahaka an-dRavalomanana Marc no ilaina noho izy tsy manana hena-maso, na amin’ny olona manodidina azy aza. Ahafahana manafoana ny halatr’omby amin’ izao fotoana, ny fisamborana ireo dahalo ambony latabatra, ka olona tsy manana hena-maso tahaka an-dRavalomanana Marc no hany mahavita izany. Fantatry ny rehetra rahateo fa na olona akaiky azy aza no manao ny tsy mety dia raisiny ny andraikitra. Noho izany tsy vahaolana ny “drone” fa ny fisamborana ny dahalo ambony latabatra ihany no ahafahana manafoana ny halatr’omby, sy ny famonoana ary fametavetana zaza amam-behivavy ataon’ ny dahalo.
Gazety TRIATRA : Nandritra ny fanambarana nataonao sy ireo depiote tao amin’ ny antenimieram-pirenena, marina ve ny fisian’ilay lalàna mikasika ny fanekena ny fanambadian’ ny olona mitovy fananahana
Hary Andrianarivo : Amin’ ny maha olom-piangonana ahy izay tsy manaiky ny fanambadian’ ny olona mitovy fananahana, dia Ravalomanana ihany no afaka manafoana sy manakana ny fandaniana sy fampakarana io lalàna io eny amin’ ny antenimieram-pirenena. Efa an-dalana mantsy ny fampakarana io lalàna io raha ny resaka sy ny vaovao heno, ka mila tohanana amin’ ny fampandaniana ny filoha Ravalomanana Marc izany. Sarotiny loatra izahay avy amin’ ny fiangonana loteranina manoloana ny fanarahana be fahatany ny fanao ratsin’ny vahiny, satria hamotika antsika izany. Ady atrehin’ny fiangonana ny tsy fanekena ny fanambadian’ny olona mitovy fananahana, ka kandidà tsy baikon’ny any ivelany no ilaina amin’ izany dia ny laharana faha-25.
Gazety TRIATRA : Tsy mankato ny fanohananao an’i Marc Ravalomanana tokoa ve ny Amontana telo
Hary Andrianarivo: Hararaotin’ny olona entina hampiadiana ny fianakaviamben’ny Amontana telo tokoa ny resaka fanagadran’i Ravalomanana an’i tantely Andrianarivo, taorian’ ny fanambarana nataoko mikasika ny fanohanako an’i Marc Ravalomanana. Any amin’ ny tambajotran-tserasera no tena ahitana izany, ary betsaka ny vaovao tsy mitombina. Manaiky tokoa aho fa nogadrain- Ravalomanana Marc i Tantely Andrianarivo, saingy na ity farany aza tsy miresaka izany intsony, satria ny fihavanana no jerena ary ny tombontsoam-pirenena. Ny fianakaviana rahateo efa nifampiresaka hatrizay, ary nanaiky fa tsy hijery ankoatra ny mahasoa ny Malagasy. Raha fifandrafiana foana no atao an-doha, hatramin’ izao isika tokony hankahala sy tsy hiara-hiasa amin’ny Frantsay noho ny famonoana ny mpiray tanindrazana tamin’ ny andron’ny fanjanahana. Ny Frantsay sy ny Alemana maninona niady nifamono, nefa amin’ izao fotoana dia samy miady ho an’ ny tombontsoan’i Eoraopa.
Gazety TRIATRA : Fombanareo avy ao amin’ ny faritanin’i Fianarantsoa ve ny mivadibadika
Hary Andrianarivo: Samy manana ny fomba nitaizana azy ny tsirairay, ary samy manana ny fomba fanaony. Tsy tokony hatao anaty kitapo iray noho izany ny rehetra, raha misy iray maningana.
Ny alarobia ho avy izao no hisokatra amin’ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana voalohany amin’ity taona ity, izay tontosain’ ireo solombavambahoaka araka ny voafaritry ny lalàm-panorenana. Mandritra izany anefa dia mitohy ihany ny hetsika izay ...Tohiny